जोक्स – Pahilo Page
चुटकिला : आज कपडा पसलमा
म : दिदी, के छ खबर ? साहुनी : के हुनु भाइ ? उही त हो नि, साडी खोल्यो देखायो, कुर्ता खोल्यो देखायो, बस्यो । हजुरलाई के देखाम ? म: बेहोस ! हा हा हा हा...
काठमाडौं । पत्रकार तथा साहित्यकार महेश राणाको पुस्तक महागुरु सार्वजनिक गरिएको छ । एबीसी टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका राणाको ‘महागुरु : काल भैरवसँगको संवार्ता’ काठमाडौंमा शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो । डा. ध्रुवेशचन्द्र रेग्मीको सितारमा भैरव आराधनाबाट सुरु भएको विमोचन पूर्ण रुपमा तान्त्रिक प्रक्रियाको ...
करेन्टको सानो झट्काले पनि मान्छेको जिउ लल्याक लुलुक पारिदिन्छ । तर एकजना युवक यस्ता छन् जसलाई ११ हजार भोल्टको करेन्टले पनि कुनै असर गर्दैन । भारतको हरियाणस्थित सोनीपतमा बस्ने १९ वर्षका दीपक जांगडा दुनियाँका एक विचित्र पात्र हुन् । २७ सय भोल्टको करेन्ट कुनै पनि मानिसलाई मृत्युको मुखमा पूराउन पर्याप्त हुन्छ । तर दी...
दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश चीनमा अनौठो परम्परा र रितिरिवाज पनि प्रसस्तै छन् । युनान प्रान्तका मुसो आदिवासीमा प्रचलित वैवाहिक संस्कार सायद दुनियामै अद्वितीय छ । यो समुदायमा बिहे गरिसकेपछि पनि लोग्नेस्वास्नीहरु आ आफ्नो घरमा बस्दछन् । अर्थात् आम रुपमा बिहेपछि बेहुली बेहुलाकोमा जाने प्रचलन यो समुदायमा ...